Qeybo ka mid ah magaalada Melbourne ayaa lagu soo rogay bandow habeen iyo maalin ah… – Hagaag.com
Qeybo ka mid ah magaalada Melbourne ayaa lagu soo rogay bandow habeen iyo maalin ah…
Posted on 7 Luulyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Australia ayaa bandow habeen iyo maalin ah kusoo rogtay qeybo katirsan magaalada ugu weyn dalkaas ee Melbourne oo ay ku nool yihiin Soomaali badan oo qaxooti ah.
Sagaal dhismo oo ku yaal Flemington iyo Waqooyiga Melbourne oo ay ku nool yihiin in ka badan 3,000 oo Soomaali ah ayaa xiran tan iyo Sabtidii iyadoo la isku dayayo in hoos loo dhigo faafitaanka coronavirus.
Dadka ayaa awoodin inay guryahooda ka baxaan, waxayna ka cabanayaan inay helaan sahayda daruuriga ah, inkastoo dowladdu ay sheegtay in boqolaal xirmooyin cunno ah iyo qalabka daryeelka carruurta loo qaybiyey.
Sababta loogusoo rogay bandowga ayaa lagu sheegay kadib markii dowladda loo gudbiyay in xaafaddaas uu aad ugu soo badanayo faafitaanka cudurka Coronavirus oo dalka Australia dib ugu soo labo kacleeyay.
Dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 53 kiis laga helay guriyaal dowladeed oo katirsan dhismayaasha bandowga lagu soo rogay ee Soomaalidu degen tahay.
Soomaalida ayaa aad uga cabanaysa iyadoo aan lagusoo wargalin bandowgaan una diyaar garoobin in albaabada loo laabay xaafadooda. Waxay kaloo sheegayaan in dadku ay wadaagayaan waxyaabaha ay haystaan taasoo keeni karta in cudurku si xun ugu faafo Soomaalida dhexdeeda.